Biiroo Barnoota Oromiyaaf.
Afaan English beekun beekumasa kan itti fakkatu EPRDF (TPLF) qoofa !!.
Biiroon Barnootaa Oromiyaa bu’uura barumsa Belgium kanan akka nuuf hojeetu qoormata bareeda ni qoophesinaf. Hayyuuleen Oromoo addunya irra jiran qindeesine seera barnoota Oromiyaa kutaa 1 hanga PhD qoophesuf nu qoophidha. Hayyulee Oromoo fi frootan Oromoo qoorannoo afaan Oromoo irratti akka isaan geggesan(ODSU) University Qorannoo tokko ijjaru qoormata wagoota 10 geggesa ture keessa ijooleen Oromoo Afaan Oromoo gosa barumsa hundan kara itti barachu danda’an irratti hojeeta ture. Afaan Oromoo kutaa 6ti gadi deebisu dhisaati hanga PhDti Afaan Oromoon barsiisuu fi barachu irratti hojeecha jira. Qoorannoof akka fakeenyati kan irratti hundofne Vietnam utuu hin tane Belgium (Flanders) ta’uu isaa Biiroon Barnoota Oromiyaaf fakeenya garii ni ta’aa.
Fakeenyaf Biyyi Belgium Afaan federaala 3 qabdi!, Dutch, French, German. Belgium Nannoo gurgudda lama qabdi Flanders fi Wallonia baayin uummata
Flanders 6,251,983 (58%), Wallonia 3,498,384 (31%) German 73, 000 les than 1% dha.
Flanders fi Wallonia keessatti barumsa kutaa 0 kasse hanga university fi PhD afaan isaanin baratu, barumsa goosa hunda. Warri Dutch fi warri French barumsa afaan isaanin baratu PhD dabalate. Kutaa 6 booda afaan dabalata yoo barbaadan akka barumsa gosa tokkoti Afaan 2 ykn 3 barachuuf mirga qabu. Warri German ammoo hanga kutaa 12ti afaan Germanin baratani universitydhaf ammoo French ykn Germanyn baratu yoo barbaadans Dutchn baratu. Qoofati of danda’ani university waan hin qabaneef. Seera barnnoota nannoo tokko keessa nannoo biran keessa hin seenu, Ministeri barumsa Belgum ilee wa'ee barumsa nannoo keessa lixee seera basuuf hin danda'u, garggarasa mallaaqa gochu fi waraaqa ragaa international tokko tokko qoophesu fi gara nannooti ergudha isaan akka ofi isaanti barbaadanti hojii irra olchatu, isaa qoofa utuu hin tane zoni ykn magaaloon ilee waan ofi fooyeefachu barbaadan fooyeesani maxxanfachuu ykn barsiifaachu ni danda’uu. In Belgium the federal government plays a very small role: it decides directly the age for mandatory schooling and indirectly the financing of the communities.
Education being organized separately by each, the Flemish Community scores noticeably above the French and German-speaking Communities. Education in Belgium is regulated and for the most part financed by one of the three communities: Flemish, French and German-speaking. Each community has its own school system, with small differences among them.
Biiroon Barnoota Oromiyaa kan irratti xiyyeefachu qabu Afaan English akka sadarka hundati fooyefatan gochudha barsiisoon Ganna barachun Afaan Englshi akka jabefatan Baratoon Afaan Englishi ciimsani akka baratan mateerial fi Kitaaboota Afaan Englishi, Guboo Afaan English (Dictionary) akka dhunfati argatan gochudha, Mani kitaaba torbeedha hanga torbeeti ganama hanga galgalatti akka mana barumsa keessatti banamu gochudha. Afaan English jabeesudha malee Afaan Dhaloota barachun qulqullina barumsa ni foyeesa malee hin balleessuu, kun abjuu Amarati. Mani Barumsa Oromiyaa keessa jiru hundi Afaan Oromoon barachun dirqama, namni Oromiyaa keesa jiratu Afaan Oromoo beekun dirqama. Namni gudan iyuu Afaan Oromoo barachu qaba jirachu yoo barbaade, malee Oromoon isaa Amaaraa wajjin dubachuuf Afaan Amaaraa barachuf dirqisifamu hin qabu, Hayyuule Oromoo amma ilee ergamtu ykn Amaarii akka waan isaan caaluti fudhaachu hin qaban.
Wixxineen Afaan Oromoo kana balleessuu erga egalan turera jeedha obboo Emmanuel David
Dhimmi kun waan yeroo gabaaba ti ta'ee miti. silumaa iyuu Master plan waliin wal maddii deemaa ture. namoon hedduun informal haala ta'een waan kana uummata keessa olifi gadi deemsisaa turan. karoori kun maqaa "national framework" jedhuun deemaa ture. kana qofaa miti. sagantaa barnoota godina adda naannoowa Finifinee illee kan naannoo Amaraa irraa koppii ta'e. seerotaa bay'eetu jiran kan kana fakkataan.
Karoora Barumsa Qinijiti Daqun Daniel Kibiretin qopha'e Gadiisa Dr. Abiyi Ahmed jalan darbuf deema kana fuudhachuu hin qabu qeeroon Oromoo Afaan Oromoon hanga University xumuruti afaan isaan barachun mirga, Kun siirna Habasha fi Faranjii ol kasaan Afaan Oromoo domsuuf kun ammoo Afaan Oromoo Afaan biyyoolessaa 2ffaa ta'aa isaa jeedhu sana Afaan Englishi bakka busuuf shiri kun hundi kan xaaxame, Oromoon shira Habasha kana hara'a ka'ee dura dhabaachu qaba. Amara Waraabessa Halkani irra Tigire Waraabeesa guyyaa wayya. Waan Afaan Oromooti dhufee kamiyuu dura dhabaachuuf qoophidha. Oromoo hin sodatiin haqaa kee irratti falmadhu, fallmachu dhifte wagaa 150 garbomte beeki, garbuma ijoolee ketti hin dabarsin, Ethiopia jirachisuuf Oromoon du'uu hin qabu, Afaan isaa ilee dhabu hin qabu.
Wixinee Afaan Oromoo kana balleessu dhisan utuu hirmana baratoota irratti hojeetan garii ture. Sababin isaa Qulqulina barnoota kan kufsee akka kooti Afaan utuu hin tane qabxiile kana;-
1. Barsiisaan daree tokko keessatti hanga barataa 120 akka barsiisuuf dirqamuu isaa 2. Qacarriin barsiisotaa dandeettiin osoo hinta'in ilaalcha siyaasaan raawwachuu isaa; 3. Barnoota keessa siyaasni seenuu isaa; 4. Jireenyi barsiisotaa jireenya nama kamii caalaa gadi buufamuu isaa 5. Kitaabni barattota qulqullina dhabuufi inni iyyu seeraan barattoota bira ga'uu dhabuu isaa
Kana duba Icciti guddatu jira ijooleen Oromoo waan deema jiru, qoorachudha, Projectiin kun Saganta Party QINJITI fi ANDINAT(AG7) kana irratti ji'aa 1 dura marii irratti ka'ee ture, waan asi irratti hin dubatamnetu jira, rakkanan waraabeesa guyyaa wayya jeene waatu duba jira. Ilaala diini akka inni afuura dhokfate nama ganu, utuu Gaafii qeerroon Oromoo itti dhumte hin deebisiin, utuu Oromoon Danga irra dhuma jiru, utuu Ormoon Walloo, Borana, Gujji, Balee, Hararge, Rayyaa, Matakal, Adamma irratti dhuma jiru siirni Barumsa kun maliif atataman godhame? Ya Oromoo nama gadisiisa, yeroo hunda moo'amun garii miti.
Utuu barumsa fooyeesu ta'ee hirmana baratoota kana foyeesu qabu turan.
Hirmana Barnoota Nannoo bara 2009 E.C.
- Tigiraay 93.2%
- Finfinnee 92.4%
- Kibba 72.2%
- Dirre Dawaa 53.8%
- Amaaraa 45.1%
- Beenishaangul 42.4%
- Oromiyaa 31.9%
- Gaambeellaa 25.9%
- Affaar 11.7%
- Somaalee 7.4%
Etana Habte Witinee kana ilaachise FB irrati akkansin bareese ture. Fakkii barreeffamaa kana immoo dookumatii Afaan Ingilizii isa "Ethiopian Education Development Road Map (2018-2030): An Integrated Executive Summary" jedhu keessaa fuulla 9ffaa gubbaatti argattu.
Barreeffamni kun raajii guddaa baata. Ministeerri Barnootaa Itiyoophiyaan eenyummaa biyyoolessaa (national identity) [tokko?] akka qabaattuuf hojii jalqabuu eda.
Ministeerri Barnootaa eenyummaan biyyoolessaa inni akka Itiyoophiyaan ijaarrattu fedhu maal akka ta'e kallattiidhan kana jedhee himuu baatu illee yaadni dugda duubaan jiru maal akka ta'e fakkiin barreeffamaa kun ni agarsiisa. 'Biyyi Veeytinaam,' jedha Ministeerri Barnootaa Itiyoophiyaa, 'afaanota 54 qabaattu illee (daa'immanis afaanota 54n kan afaan hiikkatan ta'us) Afaan Viyeetnamiiz afaan biyyoolessaa (national language) gootee kutaalee manneen barnootaa sadarkaa hundatti itti fayyadamti.' Kan bitaacha namtti ta'u garuu Ministeerri barnoota dookumantoota isaa kana keessatti afaanni Amaaraa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu malee Itiyoophiyaan afaan biyyoolessaa jedhamu qabaachuu ykn dhiisuu ija jabaatee hindubbanne. Itiyoophiyaan afaan biyyoolessaa akka hinqabne silaa beekamaadha. Sanas ta'u fakkeenya Viyeetnaam fudhachuun maliif akka ta'e beekamaadha; bakka afaanni Viyeetnamiiz biyya ofii keessatti qabu sana afaanni Amaaraa Itiyoophiyaa keessatti akka qabaatuuf hojjenna jedchuudhauma. Egaa ifatti ba'uu baatus kan yaadame inni amma afaan hojii mootummaa federaalaa jedhamee dookumatoota Ministeera Barnootaa keessatti xiyyeeffannaa guddaan itti kennamee
Kana jechuun Ministeerri barnootaa eenyummaan biyyoolessaa jedhame kun maal akka ta'ee fi akkamiin ijaaramuu akka danda'u himuu baatus kan immi jedhaa jiru eenyummaa afaan Amaaraa jalatti ijaaramu ta'uu isaati. Adeemsi akkasii kun waggaa 100 oliif yaalamee seenaa biyya keenyaa dhiigaan laaqee injifatamuun isaa beekamee osoo jiruu kana kajeeluun maaliif akka ta'e ifaa miti. Itiyoophiyaan sirna federaalizimii sabdaneessaa barkurneewwan lamaa oliif ijaarratte dhiiftee akkamiin eenyummaa biyyoolessaa afaan Amaaraa jalatti ijaaruuf adeemti. Deebii isaa Ministeera Barnootaa irra dhagayuuf kan deemnudha, hojii irra oolmaan isaa akkuma beekamu awwaala Oromummaa irratti malee osoo eenyummaan hammana ga'u jiruu kan hojii irra oolchuu mitii yaaduunuu warra yaadeef salphina baatee akka dhufu anai shakkii hinqabu.
Fakeenya Utuu biyootin barumsan beebekamoo ta'an heddun jiran biyya hin beekamne tokko Vietenamn fudhachuun habasha maltu isaan rakkise. Waatu duba jira. Isaa Habashan dubatu ykn bareesitu dhisi isaa isaan yaadan iyuu dursine beekna, kun hundi Afaan Oromoo Afaan hojii biyoolessaa akka hin tanef rakkatu Qeerroon Oromoo Qubee Generationiin diina qubee ni jilbenfaachisa.
Mootuummaan Oromiyaa Labsi Wixinne Afaan Oromoo Baleesu Habashan bareesite kana keessa harka qaba yoo ta'ee Amanta fi Jaalaali Ogannota Team Lammaa irra qabnu asiti dhumata. MNO Wixinee kana keesa harka qaba yoo ta'ee Qeequmsa gudda fi Fulbana dhufu Barumsa kutaa 1 hanga university dhaabun egalamun isaa hin olu. Habashoon Wixinnee kana qoophesan jeequmsa dhufuf ittigaafatama fudhachu qabu.
Wixineen xuree barnootaa haaraafi Amaarinyaa kutaa tokkoo ka'ee akka baratamu dhiyaate kufee jira.
Akka Wixineen kun lamaffaa hin kane gona Oromoo fi Oromiyyan Wixineen barnoota of qoophefana.
Na jiradha, Oromoon kana booda diire kamti iyuu moo'amuu hin qabu, Hayyuuleen Oromoo falmaa irra turtan hundi keessan galani keessan bilisummaa Oromoo hata''uu. isiniitin boona!!!
Bakka hundatti Oromoo fi Oromiyaaf wardiyaa tana !!!
Afaan keenya tikkfachuuf guudifachuuf mirga qabna.!!!